Harald Gustafsson ၏ပြည်တန်ဆာကြီး
မိစ္ဆာခရစ်ယာန်ဘာသာ - ဒီပုံထဲမှာထုတ်လုပ်
Harald Gustafsson အိမ်ထောင်စုနာမည်နှင့်သူ 1945 ခုနှစ်တွင်ဂိုအတွက် Smyrna ဘုရားကျောင်းတစ်ဦးသည် Pentecostal သင်းအုပ်ဆရာကြီး - 1967 သူကဗြာမှစာများခေါင်းစဉ်စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ မဟာပြည့်တန်ဆာဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်းတစ်ခုမှာ။
ပြည်တန်ဆာကြီးကို Up ကို။ 17 နဲ့ 18
ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလ spanning ဗြာဒိတျအတွက်ကြုံတွေ့ရသောကိုယ်ပိုင်စနစ်။ အယူမှားနိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်သတို့သမီးနှင့်အတူရှိဒါ - - အသင်းတော် - နှင့်လည်းပြည်တန်ဆာကြီးနှင့်အတူသားရဲနှင့်အတူရှိကြောင်းဒါ။ သင်သည်သူတို့၏သမိုင်းစကားစပ်မှာသူတို့ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်သမိုင်းရှုထောင့်, လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ နှစျဦးတစျခုလုံးကိုအခန်းကြီးကြီးအပြည်တန်ဆာ၏ဖော်ပြချက်မှဗျာဒိတ်ကျမ်းမြှုပ်နှံ။ ထို့ကြောင့်ဤအခနျးတှငျကုသသောသိသိသာသာဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိကြောင်းနားလည်ပါသည်။
မိစ္ဆာခရစ်ယာန်ဘာသာ - ဒီပုံထဲမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့လဲဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤပုံသည်မကြာခဏကျမ်းစာထဲမှာအသုံးပြုသည်ဘုရားသခင့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင့ဓမ်မဟောငျးကမျြးအစ္စရေး၏သစ်စာမဲ့ပရောဖက်တို့၏skökoväsenဟုခေါ်ကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းဘုရားကျောင်းထာဝရဘုရားအားသစ္စာမဲ့ဖြစ်ပါသည်သောအခါ, သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာပြည်တန်ဆာဖြစ်လာသည်။
အကြီးအပြည်တန်ဆာများနှင့်သတို့သမီးညီလာခံရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစုံလင်သောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာလြောကျပတျစှာဟာထူးခွားသညျ့အထဲကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ တသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူ့ဟာသူကိုယ်စားပြု; အခြားကိုယ်ကျင့်တရားဆွေးမြေ့သူမ၏စေနိုင်သော, ဒါကြောင့်မစင်ကြယ်။ တစ်ခုမှာသိုးသငယ်သည်ယင်း၏, အခြားကမ္ဘာမြေရဲ့မတရားသောသူသည်ရှင်ဘုရင်တို့နှင့်အတူဆက်စပ်နေပါတယ်။ တဦးတည်းဖြောင့်မတ်တဲ့တောက်ပအဖြူရောင်သင်္ကန်းဝတ်ထားလျက်ရှိ၏ ခရမ်းရောင်, ကတ္တီပါနီနှင့်ရွှေအမွကွေီးဘုန်းအသရေ၏ဒုတိယအသွင်။ တဦးတည်းနေတဲ့ကညာဖြစ်၏ အခြားမြေကြီးသားပြည်တန်ဆာတို့၏အမိသည်။ တဦးတည်းကိုမုန်း၏နှင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းလျက်ရှိ၏ အခြားသန့်ရှင်းသူတို့၏အသွေးနှင့်ယစ်မူးသည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုန်းအသရေ၏ဘုန်း၏သတို့သမီးကျနော်တို့ဆုံးရှုံးမျက်မှောက်; အိမ်ခြံမြေရဲ့မီးထဲကမှောင်မိုက်နှင့်မီးခိုးထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပြည်တန်ဆာ Consumer သူမ၏သော။
ဒါဟာရိုမန်ကက်သလစ်ပြည်တန်ဆာဘုရားကျောင်းတစ်ချိန်ကသတို့သမီးအသငျးတျောက apostlatidens ခဲ့သည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် exuberant ဝိညာဉျကိုဘဝထဲသို့ဝင်ပျက်စီးဖြုန်းတီး။ Priestcraft အစားဝိညာဏန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတော်တို့ကို, နောက်ဆုံးမှာလာ၏။ ဧကရာဇ်ကွန်ရောမအစိုးရပြည်ခိုင်ဖြိုးအောက်မှာအဟောင်းကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုယူသောအခါ, ကရှိပြီးသားကြာသာပတေးနေ့မှာအဘို့အသီးမှည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြည်တန်ဆာသူမ၏လက်၌စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်သူမ၏မတရားသောမေထုန်၏အညစ်အကြေးအပြည့်အဝရွှေဖလားရှိခဲ့ပါတယ်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအညီကျမ်းစာလာသည်ကိုမကြာခဏရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၏နာမတော်သည်။ ထိုအခါရောမပုပ်ရဟန်းမင်းအရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်ရနိုင်သကဲ့သို့ဿုံအယူမှားပါပဲ။ ဒါဟာဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင်စော်ကားမှုဖြစ်ပါသည်, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခငျ၏တရာအရပျဟုဆိုကာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး။ သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆိုပါတယ်။ လီယိုး X - မာတင်လူသာ၏တစ်ခေတ်ပြိုင်သူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး - ဘုရားသခငျ့ကိုးကွယ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Lateran ကောင်စီသည်ဤစကား၌အခွန်ဆက်ပေးဆောင်: "ကျနော်တို့ကအလွန်အမင်းသင့်ရဲ့ဘုရားသခငျ့တန်ခိုးအာနုဘော်ကိုချီးမွမ်း။ သင်ကဘုရားကျောင်းရဲ့ခင်ပွန်းတမန်တော်များ၏မင်းသား, စကြဝဠာသည်အရှင်မင်းကြီးဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးသည်သိုးထိန်းနှင့်ဆရာဝန်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဘုရားသခငျသညျဖြစ်ကြသည်။ "
နောက်ထပ်ပုပ်ရဟန်းမင်း, Pius IX, သူ့ကိုယ်သူများကဆိုသည်: "ငါသည်လမ်းခရီး, အမှန်တရားနှင့်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏"
ဒါဟာမာရီယာသတ်ဖို့နဲ့သန့်ရှင်းသူတို့၏ကိုးကှယျမှု, ဘာမျှပေမယ့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအယူမှားကမ္ဘာမှအမွေဆက်ခံပြီးတော့အနည်းငယ်ခရစ်ယာန် Ting ပေးသောအဟောင်းအယူမှားmångguderietဖြစ်ပါသည်အတိုင်းဤသည်အသင်းတော်၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော, idolatry ။ အဆိုပါကြာသာပတေးနေ့မှာအတွင်းမှာပဲမာရိသညျဘုရားသခငျသညျခမညျးတျောနှငျ့ယရှေုခရစျသနှစ်မျိုးလုံးလှညျ့ စား. နိုငျပါခဲ့သည်။ မာရိကအာမခံသည်။ ဟုတ်ကဲ့သူမကဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။
မရေမတွက်နိုင်သောသန့်ရှင်းသူတို့၏ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ဝတျပွုခွငျးနဲ့နှစ်ခြိုက်အဲဒါကိုအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျော်ကြားပါတယ်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအပြည့်အဝSkökokyrkansရွှေဖလား။
အဆိုပါထုံးကိုလည်းသူမ၏ညစ်ညူး fornication ပါရှိသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အကြီးနှင့်၎င်း၏မှူးမတ်ဖို့ရပ်ကွက်မာစတာနှင့်သူမ၏တရားသေလွှတ်မှသူမ၏ဖောက်ပြန်၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်ကောင်းစွာရည်ရွယ်သည်။ သူမ၏ဝိညာဉ်ရေးရာမတရားသောမေထုန်ကိုဖြစ်ခြင်း။
သို့သော်ကြာသာပတေးနေ့မှာလည်းကိုယ်ကျင့်တရားယိုယွင်းတစ်ခုအနက်ဆုံးသောတွင်းတည်ရှိ။ ကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်မကြာခဏအလွန်မတရားသောမေထုန်ကိုပါပြီ။ အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အဓိကကျိန်စာဖြစ်ခဲ့သည်။
ရိုမန်ကက်သလစ်စာသင်မှာတစ်ဦး jesuitteolog Alphonsus မာရီယာက de Liguori ၏ကငျြ့တရားဓမ္မပညာ၏ကျောင်းစာအုပ်။ ဒီအဖတ်စာအုပ်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါသည်။
နော်ဝေစာရေးဆရာ Marta Steinsvik စိန့်ပီတာHimmelnökler၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူသုံးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာသူမလုံးဝပြင်းထန်သောကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်မယ့်လမ်းအတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်းအပြောင်အကျင့်ယိုယွင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည်အဓိကအားဖြင့် Liguoris ကိုယ်ကျင့်တရားဓမ္မပညာကနေပေမယ့်တခြားကက်သလစ်စာရေးဆရာများ '' စာအုပ်တွေထဲကနေမှသာကိုးကားအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဤရွေ့ကားကိုးကားစာအုပ်၏ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှင်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းကြောင်း, ညစ်ညမ်းသောအဖြစ်ဆင်ဆာနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက်ထောင်ပေါင်းများစွာဝန်ခံချက်အတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်တို့ကိုလှည့ခဲ့ကြသူအမျိုးသမီးများ, အဘယ်သူမျှမကပိုသညျဘုရားသခငျအပေါ်ရေတွက်ထက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကက်သလစ်ဝန်ခံချက်ဖြစ်ကောင်းအခြားမည်သည့်ထက်ကိုယ်ကျင့်တရားရိုသေလေးစားမှုရှိအဓိကကျိန်စာတစ်ခုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အထုတ်ပြန်ချက်များများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသံသယသူများသည် Marta Steinsvik ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ငါးဆယ်နှစ်ကြာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းပိုင်ရှိယဇ်ပုရောဟိတ်သူယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ထိုမိနျးမနဲ့ချားလ်စ် Chiniquy ၏ဝန်ခံကဖျောပွစာအုပ်ဖတ်နိုင်သည်။
ငါတို့သည်အစောပိုင်းကအယူမှားပြည်နယ်ထောက်ပြအဖြစ်သားရဲ၏။ ဒီသားရဲနီခုနှစ်တွင်ပြည်တန်ဆာထိုင်တော်မူ၏။ ဒါဟာအစိုးရပြည်တန်ဆာဘုရားကျောင်းကိုပံ့ပိုးသော, ပထမဦးဆုံးကိုဆိုလိုသည်။ ကွန်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, ပြည်နယ်ဘာသာတရားကိုချီးမြှောက်ခြင်းသို့သောအခါဤစတင်ခဲ့ပြီး, ထိုသို့ပြည်နယ်၏အမိုးအကာနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောက်မှာလာ၏။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရဲ့အဓိကမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝန်ခံရမည်အစိုးရအနေဖြင့်သွေးထွက်သံယိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပေမယ့်ဘုရားကျောင်းကိုလည်းပြည်နယ်အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အားလုံးအစိုးရ-supported မျှဝေနှင့်ပြည်နယ်ဟောငျးကက်သလစ်၏ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောက်ယူအချို့သောအတိုင်းအတာအထိဒီအကံဆိုးအနေအထား။ နောကျပိုငျးမှာကြာသာပတေးနေ့မှာပြည်နယ်အထက်ထမြောက်တော်မူပြီ။ ပြည်နယ်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ကိုအသင်းတော်ရဲ့အန္တရာယ်skökoväg၏ခြေလှမ်းများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်သားရဲ၏ပေါ်မှာထိုင်ပြည်တန်ဆာကိုလည်းသူမကမိမိတို့လက်အတွက်ကျောက်ကပ်နှင့်ဦးဆောင် ယူ. သူ၏အပျြောအပါးမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ရှာသောကိုဆိုလိုသည်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျနော်တို့ကအရမ်းရှင်းလင်းစွာဒီကြည့်ပါ။ အဆိုပါကြာသာပတေးနေ့မှာအတော်လေးမကြာမီနိုင်ငံရေးအရအစပြုလုပ်ဆောင်လက်ကိုယူ။ ရာစုနှစ်များစွာအဘို့, မှူးမတ်များနှင့်ဧကရာဇ်ကတည်းကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းအကျေးဇူးတော်နှင့်မျက်နှာသာအနိုင်ရပါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။ ထိုသူတို့ကမကြာခဏသူမ၏ပညတ်တော်တို့ကိုဖျော်ဖြေဖို့ကိုအသင်းတော်ရဲ့ဆန္ဒရှိ tools များပါပြီ။ သူမ၏ပါဝါအချိန်များတွင်သူတို့သူမ၏စကားကိုနားထောငျဖို့ငြင်းဆန်လျှင်ဧကရာဇ်မင်း, ရှင်ဘုရင်နှစ်ဦးစလုံး, ပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြကြောင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်ဧကရာဇ်၏အတော်ကြာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအားဖြင့်သရဖူဆောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါကြာသာပတေးနေ့တိုင်းလမ်း သာ. ကွီးမွတျသောနိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသြဇာသေးအဆုံးသတ်မထားပါဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၎င်း၏အာဏာကိုဘုရားသခငျတရားစီရငျ၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီအချိန်ရဲ့အဆုံးမှာပင် သာ. ကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၏စကားကိုပြောသောအခါ, ကကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲရည်ညွှန်းကြသည်စနစ်ကြောင်းကိုအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ရှိခဲ့သည်နှင့်ဤအသင်းတော်၌အဖြစ်တစ်ဦးသည် Pentecostal အသင်းတော်၌ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လူတွေဝိညာဉ်ရေးရာskökolivသို့လဲသေကြပြီသူတွေကိုဖြစ်နိုင်သည်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းပါပြီ။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာဖွင့်စနစ်ရဲ့ကဒါ။ "ထိုအခါငါသန့်ရှင်းသူတို့၏အသှေးနှငျ့အမြိုးသမီးကိုယစ်မူးကိုမြင်တော်မူ၏။ " အဆိုပါကြာသာပတေးနေ့မှာရှိသမျှကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရောမဧကရာဇ်အတူတကွထက်ပိုသောအသွေးကိုအာဇာနည်သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာအနည်းဆုံးငါးဆယ်သန်းအာဇာနည်ဒီအသင်းတော်၌အသတ်ခံကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လူအမြားတို့သည်သန့်ရှင်းသူနှင့် ဆက်စပ်. ပုပ်ရဟန်းမင်းအရက်စက်မှုဆင်းအာဇာနည်နှင့်အရိပ်ထဲတွင်ဧကရာဇ်နီရိုရဲ့ရက်စက်ယုတ်မာအပါအဝငျ။
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၎င်း၏တူရိယာနှင့်အတူအလယ်ခေတ်အတွင်း Inkvisationen ညှဉျးဆဲအခြားသူများကိုတီထွင်အရှိဆုံး diabolical ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ သူတို့ကရိုးရိုးသူတို့ရဲ့သားကောင်သတ်ဖြတ်အတူအကြောင်းအရာကြဘူး။ သေခြင်းတရားပြည်တွင်လွတ်လပ်ရေးဖော်ဆောင်အဖြစ်မလာခင်ဤသန့်ရှင်းသောများစွာသောထို direst ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြောထောင်ထဲဖော်ပြချက်ကျော်လွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်စပိန် inkvisationen တစ်သွေးထွက်သံယိုဂုဏ်သတင်းရယူလိုက်သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကခန့်အပ်အဖွဲ့ဝင်များ Inkvisationsdomstolarnas ။
ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းယနေ့ဘေးတွင်မဟုတ်သီအိုရီပယ်ချသို့မဟုတ်တရားဝင် Inquisition ဖျက်သိမ်း။ 1908 ခုနှစ်တွင် nyorganiserades Inkvisitionskongregationen နှင့်ပထမဦးဆုံးအဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဘုရားကျောင်းအသငျးတျောမြားအကြားနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်တော်တိုင်ဤအဖွဲ့အစည်းဌာနမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူတို့ယူမှားသူကိုခေါ်တို့၌ရှိသောအသင်းတော်ရဲ့သဘောထားအကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်။
ထိုသူတို့၏ယုံကွညျခွငျး၌သူ၏အချိန်ထိုကဲ့သို့သောခရစ်ယာန်တွေဟာအတွက်ကိုညှဉျးဆဲရုရှားနိုင်ငံအတွက် Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, အသင်းတော်ရဲ့အယူဝါဒကနေကွဲပြားပေမယ့်။ အများစုက Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း liquidated ရုရှားတော်လှန်ရေးနှင့် ဆက်စပ်. ရသော bolsehevikerna အတွက်ရက်စက်လမ်းကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အသံတွေကိုနှင့်ခြံကြီးပြင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အခြားယုံကြည်သူများကိုအသင်းတော်ရဲ့ဘေးထွက်နှင့်၎င်းတို့၏ဓမ္မဆရာများအနေဖြင့်ထိတွေ့သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပြောဆိုဘူး။ သန့်ရှင်းသူတို့၏လူအစုအဝေးရုရှားအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ languished ကြောင့်အခြားယုံကြည်သူများအားဤဘုရားကျောင်းသဘောထားလူမဆနျဆငျးရဲဒုက်ခအကြောင်းမဲ့ပါပြီ။ တစ်ဦးကထူးဆန်းဆက်ဆံရေးမျိုးကိုအသင်းတော်ပြည်နယ်နှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့သို့ ဝင်. , ထို့နောက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အမည်ရပြည်နယ်ခရစ်ယာန်တွေကိုညှဉ်းဆဲရန်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းသည့်အခါဤအသွေးထွက်သံယိုတာဝန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ထိုအခါလူထုအာဏာပိုင်များနောက်ပိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကွပ်မျက်ခံရသောအတိုင်းအတာအထိကဘုရားကျောင်းရဲ့ tools များဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာစာရေးဆရာကဆိုပါတယ်: "နောက်တဖန် ထပ်မံ. နှင့်ကစာတစ်စောင်အသွေးတော်နှင့်၎င်း၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုဒေါသအရှိန်အဘို့မိမိတို့အငတ်တစ် docile တူရိယာသို့အျောသိုဒေါချမှတ်ခြင်းအင်အားကြီး, ဘုရားvíirldsordningensကိရိယာများ, တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒီသတ်ဖြတ်မှုအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သိရသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအကျဉ်းထောင်များဖွင့်လှစ်မကြာမီတွေ့မြင်ရှိရာအမြိုးသမီးတတောင်တက်ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနီသောတိရိစ္ဆာန်များ (ဗြာ 17), တပ်ဆင်ထား seductive ပါဝါ bewitching နှင့်တကွ, စည်မီးတောက်နှင့်မိစ္ဆာခရစ်ယာန်တရားသဖြင့်စီရင်အပြစ်များကိုမိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်ပုံနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာတစ်förvärldsligadဘာသာတရားကိုskökovíisenကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှင့်အတူသဘောတူ။
ဤသည်တရားသဖြင့်စီရင်အကြီးအကျယ်အတူတူသားရဲတကောင်အားဖြင့်ပြဌာန်းပါလိမ့်မည်ယခင်ကသူမ၏ဆောင်သွားကြ၏။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ကျနော်တို့အနီရောင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရက Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းလုယူခြင်းနှင့်လုံးဝနီးပါးသူမ၏နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရထားပြီးဘယ်လိုမြင်ကြပြီ။ အလားတူမက္ကဆီကိုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ 16: ဤဥပမာမှတဆင့်လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်နဲ့အတူ vilcldjuret ဗျာ 17 ( "ပြည်တန်ဆာကိုမုန်း, သူ့လူဆိတ်ညံလျက်ပါစေနှင့်အဝတ်အချည်းစည်းရသဖြင့်, သူမ၏အသားကိုစားရကြလိမ့်မည်, မီးနှင့်အတူသူမ၏ရှို့" မည်သည့်အခါကသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးတစ်ခုရရှိရန် ခ) ။
ဒါဟာသညျယရှေုခရစျ၏အသင်းတော်၏, မြေကြီးပေါ်မှာသူ့အလုပ်၏မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်သောစနစ်, ထိခိုက်စေသောဆဲသညျဘုရားသခငျ၏အလွန်တရားသဖြင့်စီရင်သည်။ ထိုအခါပြည်တန်ဆာပေါ်မှာဤသညျဘုရားသခငျ၏တရားစီရငျခွငျးသညျကောငျးကငျဝမ်းမြောက်ကျလာသောပါလိမ့်မယ်။
"သူမ၏မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို, သငျသညျကောငျးကငျဘုံနှင့်အသငျတို့သညျသနျ့ရှငျးသောတမန်တော်တို့နှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းကျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဘုရားသခငျသညျသူမ၏အပေါ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်, နှင့်သင်၏အပြစ်ကိုပြီ" (ဗျာ 18း20) ။
ဗြာဒိတျဆယ်နှစ်ခနျးတှငျပြောရလျှင်သဘောတရားများအဖြစ်ပြည်တန်ဆာများနှင့်မဟာဗာဗုလုန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကတချို့စဉ်းစားရခက်ခဲ့ပါသည်။ ငါကသတို့သမီးနှင့်နယူးဂျေရုဆလင်နဲ့အတူတူပါပဲအဖြစ်ကိုပြင်ဆင်သောအခါကဲ့သို့တူညီသောအချိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့။ နည်းလမ်းကောင်းစွာပြည်တန်ဆာမဟာဗာဗုလုန်အတွက်နေထိုင်နေစဉ်နယူးယေရုရှလင်မြို့သတို့သမီး၏ထာဝရနေရာဖြစ်သည်ကြောင်းကို။ အဲဒီမှာသူမတစ်ဦးမိဖုရားနဲ့တူထိုင်နှင့် Babel စိတ်ဝိညာဉ်၏သူမပိုင်တော်မူ၏။ မဟာဗာဗုလုန်အောက်မှာသွားသည့်အခါထို့နောက်လည်းဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်တရားစီရင်ခြင်းပြည်တန်ဆာဖြစ်၏။
သငျတို့သသူမ၏အပြစ်များကိုဆက်ဆံမဖြစ်, သင်တို့သည်သူ၏ဘေးဒဏ်မခံကွောငျး, သူမ၏ထဲကလာကြ, ငါ၏လူတို့။ " (ဗျာ 18း4) ။
အားလုံးဝိညာဉ်ရေးရာskökoväsenထဲက လာ. ကြည့်
ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ပြည်တန်ဆာဘုရားကျောင်းများ၏တရားသဖြင့်စီရင်ပြဌာန်းခံရဖို့ဖြစ်တယ်အချိန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းအချိန်ကိုသိုးသငယ်၏ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဘို့ချဉ်းကပ်သည် ဖြစ်. , သိကြသည့်အတိုင်း။ သူကြွလာသောအခါကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ဆုံရန်အလိုရှိနေကြသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်သတို့သားမှ unswervingly သစ္စာရှိသောသူဖြစ်နိုင်ပါစေ!
Vecka 29, fredag 23 juli 2021 kl. 17:18